तपाईले CDMA SKY फोन (को ग्राहक बन्नु) लिनु भएकोमा स्वागत छ । अब तपाईले जुनसुकै ठाउंको जो कोहिसंग जहांपनि SKY फोनबाट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईलाई जहिले मन लाग्छ तब आफ्नो व्यालेन्स बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
SKY प्रिपेड सेवाका सुविधाहरुः
� कुनै अर्को CDMA फोन अथवा PSTN फोनबाट रिचार्ज गर्न सकिने ।
� मासिक रेन्टल नपर्ने ।
� अन्तराष्ट्रिय कल सुविधा ।
� १२ महिनासम्म पनि समाप्त अवधि नसकिने ।
� थोरै मुल्यमा तपाईलाई चाहिने पर्याप्त मिनेट पाईने ।
अन्य थुप्रै सुविधा सक्रिय र निष्क्रिय गर्ने चार्ज नलाग्ने ।
(२) How to make Calls? कसरी कल गर्ने ?
Landline अथवा CDMA फोनमा कल गर्नु परेमा निम्न अनुसार डायल गर्नुहोस ।
०‌ + एरियाकोड + टेलिफोन नम्वर
जस्तै : ० १४ XXXXXX
मोबाइलमा कल गर्दा पुरा मोबाईल नम्बर डायल गर्नुहोला ।
98 X X X X X X X X
बिशेष नम्बर डायल गर्दा तल दिए जस्तै डायल गर्नुहोस ।
१९७, १९१, १६१६, १४१५ र् इत्यादि ।
अन्तराष्ट्रिय कल गर्न
०० र अन्तराष्ट्रिय नम्बर डायल गर्नुहोस्
बजेट कल नम्वर सहित डायल गर्नुहोस्
१४२५ र १४४५ र अन्तराष्ट्रिय नम्बर
(३) Special Messages / Alerts (महत्वपू्र्ण सन्देश र र्सतर्कताहरु)
1. तपाईले १४१५ डायल गर्नु भई एउटा स्वागत सन्देश सुन्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि तपाईले नेपाली वा अंग्रेजी भाषा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ ।
2. जब तपाईको व्यालेन्स रु. ५०।- वा सो भन्दा कम हुनेछ तब तपाईलाई एउटा सावधान र (र्सतर्क) सन्देश सुनाइन्छ । कृपया तपाईको CDMA प्रिपेड फोन रिचार्ज गर्नुहोस । यो सन्देश तपाईलाई हरेक वाहृयगमन कल गर्दा सुनाइन्छ ।
3. कुनै निश्चित कलको बेलामा यदि तपाईको कलको अवधि ६० सेकेन्ड मात्र बांकी रहेमा एउटा र्सतर्क सन्देशले तपाईको SKY फोनको व्यालेन्स घटेर "सुन्य हुनेछ र कल काट्टिनेे छ" भन्ने जानकारी गराउंदछ ।
(४) Easy to Recharge (सजिलै रिचार्ज गर्न मिल्ने)
तपाईको CDMA SKY फोन रिचार्ज गर्नलाई तल उल्लेखित बुंदाहरु अनुसार निर्देशन प्राप्त गर्नुहोस् ।
1. SKY फोन रिचार्ज कार्डलाई स्क्याच गरी १५ अंकको पिन कोड प्राप्त गर्नुहोस् ।
2. आफनो CDMA फोन वा नेपाल टेलिकमको अरु कुनै फोनबाट १४१५ डायल गरी उल्लेखित निर्देशन पालना गर्नुहोस् ।
3. तपाईको रिचार्ज कार्डको १५ अंक पिन कोड मागेपछि दिनुहोस् ।
4. तपाईको SKY प्रिपेड फोन रिचार्ज भयो र आफनो नयां व्यालेन्स र संचालन अवधि सुन्न सक्नु हुनेछ ।
नोटः तपाईले आफनो CDMA SKY प्रिपेड फोन रिचार्ज गर्दा तपाईको नयां व्यालेन्स रिचार्ज कार्डको मुल्य र पुरानो बांकी व्यालेन्सको योग हुनेछ ।
(५) Sky Phone Validity and Recharge Period (स्काई फोन सक्रिय (लागु अवधि) र रिचार्ज अवधि)
तपाईको स्काई फोन रिचार्ज गर्नु हुंदा, रिचार्ज कार्डमा उल्लेखित अवधि सम्म तपाईको फोनले काम गर्नेछ । तपाईको फोनको संचालन अवधि समाप्त भएमा सो रिचार्ज अवधिमा जानेछ । सबै प्रकारका रिचार्ज कार्डहरुमा संचालन अवधि समाप्त भएका रिचार्ज अवधि ३० (तीस) दिनको हुनेछ । यस रिचार्ज अवधिमा आवगमन कल, वाहृयि कल, SMS र VMS सेवाहरु निषेध हुनेछन भने तपाईले आफनो फोन दुवै अवधिमा रिचार्ज गर्न सक्नु हुनेछ ।
(६) Check Balance:
� १४१५ डायल गरी भाषा छनौट गर्नुहोस् ।
� व्यालेन्स बुझ्न अंब १ थिच्नुहोस् ।
� तपाईले आफनो वर्तमान व्यालेन्स र कार्डको समाप्त मिति सुन्न सक्नु हुनेछ ।
� रिचार्ज गर्ने समयमा कृपया आफनो मिल्ने पिन नम्बर सहि तरिकाले डायल गर्नुहोस् यदि १२ पटकसम्म गल्ती भएमा तपाईको फोनको अवस्था कालो सुचीमा जानेछ । यस अवधिमा बाहृयि कल निषेध हुनेछ ।
कृपया १९१ वा नजिकैको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सर्म्पर्क गर्नुहोस् ।
(७) Value Added Services
मुल्य अभिबृद्धि सेवाहरु
CLIP "Calling Line Identification Presentation"
यस सुविधाबाट आफनो टेलिफोन मा कल गर्ने व्यक्तिको टेलिफोन नम्वर देख्न सकिन्छ ।
SMS (Short Messges Service)
यो सुविधामा तपाईले आफनो सन्देश -१६० अक्षरको) र्टाईप गरी अर्को CDMA फोनमा पठाउन सक्नुहुन्छ । यो सुविधा क्प्थ् फोनमा पहिले नै राखिएको हुन्छ ।
भ्वाईस मेलवक्समा ध्वनि सन्देशहरु जम्मा गरी राख्न र निकाल्न सकिनछ । भ्वाईस मेलवक्स नम्वर भन्नु नै ग्राहकको CDMA नम्बर नै हो । जब CDMA ग्राहकले भ्वाईस मेल सुविधा नम्वर डायल गर्नुहुन्छ उहांलाई ध्वनि निर्देशनले सहयोग गर्नेछ । मेलबक्स मा छोडिएको सन्देशहरु केबल मेलबक्स धनिले मात्र सुन्न सक्नुहुन्छ ।
Access Code: १६१६
थप जानकारीको लागि VMS सेवाको Brochure हेर्नुहोला ।
(८) Points to remember �सम्झनु पर्ने कुराहरु"
� कृपया आफनो प्रिपेड फोनमा पर्याप्त व्यालेन्स भए नभएको जानकारी राख्नुहोस् ।
� समय समयमा १४१५ डायल गरी व्यालेन्स र संचालन अवधि बुझ्नुहोस् ।
� अरु कुनै फोनबाट रिचार्ज गर्ने समयमा, रिचार्ज गर्नुपर्ने फोन नम्बर मिल्ने गरी दिनुहोस् ।
� रिचार्ज गर्ने समयमा, कृपया आफनो फोनबाट रिचार्ज गर्नुहोला किनभने आफनो फोनबाट रिचार्ज गर्ने बेला फोन नम्वर दिनु पर्दैन ।
SKY प्रिपेड फोन सहि फोन संचालन अवधि भित्र चलाउनु होला यदि संचालन अवधि समाप्त भएमा यसले काम गर्दैन ।
(९) Supplementary Services
ग्राहक कलमा व्यस्त भएको बेलामा, यो सुविधाले नयां आगमन कल आएको थाहा पाईन्छ र सो कल उठाउन वा काटन सकिन्छ । यदि नयां कल उर्ठाईएमा ग्राहकले २ वटा कलमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।
सक्रिय गर्न *७४
निस्क्रिय गर्न *७४०
अस्थायी निस्किय गर्न *७००# टेलिफोन नम्वर
यो सुविधा सक्रिय गरेको खण्डमा, ग्राहकले सबै आगमन कल निषेध हुनेछ ।
सक्रिय गर्न * ५७
निस्किृय गर्न * ५८
(१०)3Party Call
यो सुविधामा एकै समयमा तीनजना बिच कुराकानी गर्न सकिनेछ । दुईजनाको कुराकानीको बिचमा, कल कि थिच्नु भई तेश्रो व्यक्तिलाई नम्वर डायल गरी कुराकानीमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो सुविधामा ग्राहकले आफनो आगमन कललाइृ अर्को CDMA, PSTN, GSM वा भ्वाईस मेल बक्समा फर्वाड गर्न सक्नेछ ।
(११) Call Forwarding - No Answer
यो सुविधामा यदि आगमन कल नउठेको खण्डमा २० सेकेन्डपछि अर्को नयां नम्बरमा आगमन कल हुनेछ ।
सक्रिय गर्न * ९२+ टेलिफोन नम्वर
भ्वाईस मेल बक्स दर्ता गर्न * ९२+८
निस्क्रिय गर्न * ९२०
Call Forwarding - Default
यो सुविधा राखेको खण्डमा तपाईको आगमन कल अरु नम्वरमा जानेछ जब तपाईको फोन व्यस्त, नउठेको, स्विच अफ भएको र आगमन कल काट्टिएको बेला ।
(१२) Call forwarding - Busy
यो सुविधामा यदि तपाई कलमा व्यस्त हुनुहुन्छ भने नयां आगमन कल आउंने बित्तिकै अर्को नम्वर मा यो कल जानेछ ।
सक्रिय गर्न *90+ टेलिफोन नम्वर
भ्वाईस मेलबक्स दर्ता गर्न *90+8
निस्क्रिय गर्न *900
यो सुविधा सक्रिय गरेमा , तपाईको सबै आगमन कल नयां नम्वरमा जानेछ ।
सक्रिय गर्न *72+ टेलिफोन नम्वर
भ्वाईस मेल बक्स दर्ता गर्न *728
निस्क्रिय गर्न *720
(१३) To change PIN Number
पिन नम्वर परिवर्तन गर्न
� पिन नम्बर परिवर्तन गर्न अंक ३ थिच्नुहोस् ।
� कृपया पिन नम्बर दिएर, ३ कि थिच्नुहोस् ।
� कृपया नयां ८ (आठ) अंकको पिन नम्बर दिएर ३ कि थिच्नुहोस ।
� कृपया नयां ८ (आठ) अंकको पिन नम्वर पुन दिएर ३ कि थिच्नुहोस् ।
� तपाईको नयां पिन नम्बर कायम भई सिष्टमले तपाइलाई तपाईको नयां पिन नम्वर सुनाउंने छ । कृपया आफनो नम्वर नविर्सनुहोस र कसैलाई पनि नदिनुहोला ।
(१४) Claim Missing
यदि तपाईले आफनो प्रिपेड कार्ड र फोन हराउनु भएमा सो हराएको दावी जुनसुकै NT फोनबाट गर्न सक्नुहुन्छ ।
� १४१५ डायल गरी चाहिएको हराएको दावि गर्ने मेनु छान्नुहोस ।
� हराएको दाबि गर्न अंक एक थिच्नुहोस ।
� कृपया हराएको दावि गर्न प्रिपेड कार्ड नम्वर दिएर ३ कि थिच्नुहोस ।
यसपछि तपाईले "प्रकृया सफल भयो" भन्ने सन्देश सुन्नुहुनेछ ।
(१५) Cancel MissingClaim
� कुनै ल्त् फोनबाट १४१५ डायल गरी हराएको प्रिपेड कार्डरफोन दाबि गर्ने मेनु छनौट गर्नुहोस् ।
� हराएको दावि हटाउन अंक २ (दुई) थिच्नुहोस र अरु कुनै कि थिच्नु भई सो हटाउनु सक्नुहुन्छ ।
� कृपया हराएको दावि गर्न प्रिपेड कार्ड नम्वर दिएर ३ थिच्नुहोस ।
� कृपया पिन नम्वर दिएर ३ कि थिच्नुहोस ।
अब तपाईले "प्रकृया सफल भयो" भन्ने सन्देश सुन्नु हुनेछ ।
(१६) SKY Phone Subscription Cost
Registration Charge 50
Ownership Charge 20
Talk time 1065
Set price 4420
Total Price 5555
(१७) SKY एजयलभ त्बचषा
Local Calls Rs 2.40 + TSC + VAT
STD Calls Rs 4.40 + TSC + VAT
International Calls RS 2.00 + PSTN ISD Charge + TSC VAT
Short Message Service (for 140 characters)
For Natinal Rs 1 + TSC + VAT
For International Rs 10 + TSC + VAT
(नोटः माथि उल्लेखित तालिका परिवर्तन हुन सक्नेछ)